Filoha Rajaonarimampianina : Niray fo tamin’ireo traboina -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Rajaonarimampianina : Niray fo tamin’ireo traboina
Taorian’ny fandalovan’ny rivo-doza Enawo teto an-drenivohitra dia nidina an-tsehatra nijery ireo fahasimbana vokatr’iny rivo-doza iny teny amin’ny kaominina Soavina, teny amin’ny distrikan’Atsimondrano sy ireo fianakaviana tra-boina teny amin’ny Ans Ampefiloha ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery mivady sy ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta narahan’ireo mpikambana sasantsasany ao amin’ny governemanta, omaly maraina. Mahakasika ny fahavakisan’ny fefiloha manamorona ny reniranon’i Sisaony eny Soavina dia nanome baiko avy hatrany ny Filoha ny amin’ny tokony hametrahan’ireo tompon’andraikitra sambo haingam-pandeha eny an-toerana. “Te-hanome baiko ireo tompon’andraikitra isan-tokony aho satria mety tsy ho voafehintsika ny fiakatry ny rano. Aoka apetraka aty an-toerana ireny “vedette rapide” ireny satria raha sanatria misy loza hitranga dia voaaro haingana. Ny ain’ny olona no tsy maintsy arovana. Ary manentana ireo mponina aho mba tsy hiandry ho tonga ny rano vao miala fa mandraisa fepetra dieny izao.”
Taorian’ny fidinana teny Soavina, nihazo ny Ans Ampefiloha indray ny Filoha mivady sy ireo mpikambana avy ao amin’ny governemanta nitondra fanampiana sy fankaherezana ireo traboina eny an-toerana. “Mampahery anareo aho. Miray fo, miray saina ary miray fanahy amin’ireo ao anatin’ny fahasahiranana mahazo anareo izao. Tonga eto izahay nitondra fanampiana ho anareo rehetra toy ny vary, katsaka, “farine”. Misy koa ny sakafo efa natokana ho an’ireo zaza latsaka ny 5 taona. Mampahery ara-pahasalamana anareo koa izahay. Tsy manary anareo aho fa miaraka aminareo. Mahereza, mahereza, mahereza ary samia ho tahian’Andriamanitra”, hoy ny Filoham-pirenena.
Nampahery ireo any Avaratry ny Nosy
Nandritra ny fidinana ifotony nataon’ny Filoha izay ihany koa dia tsy nanadino ireo mponina any amin’ny faritra ny tenany fa nitodika manokana nampahery ireo mponina tany amin’ny toerana nandalovan’ny rivo-doza Enawo. “Mitodika amin’ny havantsika izay lavitra antsika nefa any amin’ny toerana nandalovan’ny rivo-doza aho. Miainga any amin’ny faritra Avaratra, any Sava sy izay lalana nandalovany. Miara-ory amin’ireo tra-pahoriana satria nisy ireo namoy ny ainy, ireo traboina. Miarahaba ihany koa ireo tsy maty fo aman’aina ary aoka hanaraka akaiky ireo fepetra rehetra omen’ny tompon’andraikitra amin’ny fiatrehana ny loza”, hoy ny Filoha nampahery ireo mponina any amin’ny tapan’ny Avaratra ny Nosy. Nambarany ihany koa fa tsy mitazam-potsiny ny fitondram-panjakana fa efa mandray ny andraikiny mahakasika ny fanampiana ho an’ireo mponina. “Efa mandeha ny fanampiana any amin’ny faritra. Toa ny any Sava, efa mipetraka ny rafitra handray an-tanana ny fanampiana sy ny fandaminana rehetra. Mbola handeha any amin’ireny toerana ireny ny tenako fa ny toetr’andro no mbola tsy hahafahan’ny Filoha mandeha any fa dia efa mampahery ireny olona any amin’ny faritra ireny ary manome toky ny fitondram-panjakana amin’ny sehatra izay misy azy fa efa mandray ny andraikiny fa kosa mila mifanolo tanana amin’izany ny rehetra”, hoy hatrany ny Filoha. Nanararaotra nisaotra ireo mpiara-miombon’antoka toa ny Unicef, Fnuap, Onn, ihany koa ny Filoha tamin’ny fanoloran-tanana nentin’izy ireo ho an’ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka malagasy amin’izao fotoan-tsarotra andalovan’ny firenena izao. Marihina fa mahatratra 52307 ireo traboina manerana ny Nosy amin’izao fotoana izao, raha ny tatitra avy amin’ny BNGRC.